Khabiir Caalami Ah Oo Isbarbar-dhigay Somaliland Iyo Soomaaliya - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Khabiir Caalami Ah Oo Isbarbar-dhigay Somaliland Iyo Soomaaliya
By Deeq A., August 14, 2019 in News - Wararka
(SLT-Washington)-Michael Rubin oo ah xeel-dheere Millatari iyo aqoonyahan Maraykan ah ayaa is barbar-dhigay baaxadda iyo dhererka dhulka ay ka kala taliyaan madaxweyneyaasha Jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo uu tilmaamay inaanay shaqo isku laheyn isla markaana aanay isku duruuf ahayn.
Wakaaladda Wararka Somaliland ee SOLNA, ayaa soo xigatay warbixin uu Khabiir Michael Rubin maanta ku baahiyey Wargeyska Siyaasadda Falanqeeya The Hill oo fadhigiisu yahay Maraykanka.
Mr.Rubin wuxuu xusay in Madaarka Muqdisho oo ah Khadka Cagaaran ee dalka Soomaaliya uu yahay mid aad loo ilaaliyo oo qaali ah, iyadoo tobanaan sanno ay Soomaaliya ka jirtay sharci la’aan iyo xasilooni darro.
Waxaanu intaas ku daray in wax kastaa ka dhici karaan Muqdisho. Waxaanu ku dooday in ashkhaas kooban oo ka mid ah dadka shisheeyaha ahi ay dibadda uga bixi karaan madaarka Muqdisho, iyagoo ay la socdaan ilaalo aad u hubaysan. Waxa kaloo uu iftiimiyey in diblomaasiyiinta ku sugan Soomaaliya oo ay ka mid yihiin kuwa Maraykanka iyo Yurub ay u furan tahay inay ku sugnaadaan Madaarka Muqdisho gudihiisa ama inay iska joogaan Kenya.
Magaalada Dekedda ah ee Berbera arrimaheedu way ka duwan yihiin Soomaaliya waxaana laga furay hudheello cusub, waxaana isdhexgalay bulshada iyo dadka shisheeyaha ah oo magaalada ku wada dhaqan.
Sidoo kale, caasimadda Somaliland ee Hargeysa waxay sarrifleyaashu saxaaradahooda lacagta kaga hoydaan dibadda.
Michael Rubin wuxuu intaas raaciyey in Jamhuuriyadda Somaliland aanay wax falal argagixiso ah ka dhicin muddo ku siman toban sanno, halka ay Muqdisho iyo Kimaayo joogto noqdeen weerarada argagixisadu.
Mr. Rubin wuxuu sheegay in Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka taliyo dhul masaafadiisu dhan tahay 50.000 Mile oo laba jibaaran, halka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ka arrimiyo dhul bedkiisu gaadhayo 50.000 Feet oo ah aqalka Villa Soomaaliya.
Waxa kaloo Rubin uu sheegay in aanay Somaliland iyo Soomaaliya isku duruuf ku sugnayn, sidaas awgeedna aanay habboonayn in digniinta socdaalka ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanku soo saarto aanay israacin Somaliland iyo Soomaaliya.
Waxa kaloo uu xusay in ciidammada ilaalada xeebaha Somaliland aanay u ogolaanin budhcad baddeeda xeebta Somaliland oo dhererkeedu yahay 450 Mile.